वैज्ञानिकहरुले फेला पारे कोरोना भाइर`सलाई शरीरमा फैलि`नबाट रोक्ने एन्टि`बडी ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Corona (COVID-19) Updates/वैज्ञानिकहरुले फेला पारे कोरोना भाइर`सलाई शरीरमा फैलि`नबाट रोक्ने एन्टि`बडी !
काठमाडौं। कोरोना भाइरस महा`मा`री रोक्ने अभि`यानमा निरन्तर सक्रि`य वैज्ञानि`कहरुको टोलीले यस्तो एन्टि`बडी फेला पारेका छन् जसले कोभिड–१९ लाई मानिसको शरीरमा फैलिन`बाट रोक्नेछ । यो खोजीसँगै वैज्ञानिक`हरुले छिटै कोभिड–१९ को उपचारको लागि प्रभा`वकारी भ्या`क्सिन बना`उन सकिने अपेक्षा गरेका छन् ।
यो एन्टिबडीले कोरोना भाइर`ससँग टाँसिएर उसको बाहिरी काँडे`दार पत्र तोडेर उसलाई नि`ष्क्रिय गरिदिनेछ । यो एन्टि`बडीको नाम ४७ डी ११ राखिएको छ ।यो एन्टिब`डीको खोजीसँगै वैज्ञानिकहरुमा आशा जागेको छ कि अब उनीहरु कोरोना भाइरसलाई शरीरमै निष्क्रि`य पार्न स`क्नेछन् ताकि कोरोना भाइरसको संक्र`मण एक व्य क्तिबाट अर्को व्यक्ति`मा नफैलियोस् ।
डेलीमे`लको रिपोर्ट अनुसा`र मुसामा यो एन्टिबडीको परीक्षण सफल भएको छ । युरोपका वैज्ञानिकहरुले मुसामा पाइने ५१ सेल लाइन्स कोशिकाहरुमा यो एन्टिबडी खोजेका हुन् । त्यसपछि यसलाई मानि`सको लायक बनाउनको लागि जेनेटि`कली इन्जि`नियर गरिएको छ । त्यसपछि उनीहरुले यो एन्टिब`डीको परीक्षण २००३ मा फैलिएको सार्स कोरोना`भाइरस माथि गरे । यो एन्टिब`डीले २००३ को सार्स कोरोना भाइरसलाई नि`ष्क्रिय गरि`दियो ।
यससँगै वैज्ञानिकहरुले कोभिड १९ पनि सार्स कोरोनाभाइरस परिवारको सदस्य भाइरस भएकोले यो एन्टिबडी त्यसलाई पनि कमजोर पार्न र समाप्त गर्न सफल हुने दावी गरेका छन् । वैज्ञानि`कको यो टिमको नेतृत्व युट्रेच युनि`भर्सि`टीका प्रोफेसर बेरें`ड जेन बोशले गरिरहेका छन् । प्रोफेसन बोशका अनुसार यो एन्टिबडीमा यस्तो क्षमता छ जसले कोभिड–१९ लाई समाप्त पार्न सक्छ किनकि यो एन्टि`बडीले भा`इरसको त्यो लेय`रमा आक्र`मण गर्छ जसको प्रयोग भाइरसले कोशि`कामा टाँसिनको लागि गर्छ ।
प्रोफेसर बोश`का अनुसार यस्तो एन्टि`बडीको कारण यदि मानव शरीरमा भाइरस फैलिन रोकिएन भने पनि राम्रो कुरा यो हो कि एन्टि`बडीका कारण कोरोना भाइरसलाई मानव शरीरमा फैलिन निकै धेरै समय लाग्नेछ । अर्थात कोभिड–१९ भाइर`स शरीरमै कमजोर हुनेछ ।वैज्ञानिकहरुले प्रयोगशा`लामा मुसाला`ई कोरोना भाइरसबाट संक्र`मित गराए । वैज्ञानिकहरुले देखे कि भाइरसले जब मुसाको शरीरमा प्रवेश गर्यो, मुसाको शरीरभित्र ५१ किसिमका एन्टिबडी निस्किन सुरु भयो । यिनै ५१ किसिमका एन्टि बडीमध्ये ४७डी११ एन्टिबडी पनि थियो जसले कोरोना भाइ`रसको बाहिरी पत्रलाई नष्ट गरिरहेको थियो ।
यहीँ वैज्ञानिकले यो एन्टिबडीको पहिचान गरेका हुन् । कोरोना भाइरसको आकार गोलो हुन्छ । उसको चारैतिर एस–२ नामक प्रोटिनको काँडे`दार पत्र हुन्छ । यो काँडेदार पत्र नै मानव शरीरका कोशिका`हरुमा टाँसिन्छ । त्यसपछि भाइरसले मानव शरीरका कोशिकाहरुको बाहिरी पत्रलाई गलाएर कोशि`काभित्र आफ्नो जीन छोडिदिन्छ । कोशिकामा जीन छोडेपछि भाइरस कोशिका`हरुलाई खाएर आफ्नो सं`ख्या बढाउन सुरु गर्छ ।